အဆိုပါ Bat! | November 2019
အဓိက အဆိုပါ Bat!
အဆိုပါ Bat များအတွက် AntispamSniper သုံးစွဲဖို့ဘယ်လို!
အထူးကျွန်တော်တို့တစ်ယောက်ချင်းစီအကြိမ်ကြိမ်ငါ့အ Inbox ထဲတွင်မလိုချင်တဲ့အီးမေးလ်နှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် - စပမ်း။ ဒီလိုမျိုး၏ e-mail ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုအပြောင်းအလဲနဲ့ဆာဗာ၏စင်မြင့်မှာ filtered ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်းလုံးဝကျနော်တို့ကြော်ငြာမလိုအပ်ပါဘူး, ပင်လိမ်လည်လှည်မေးလ်သို့သျောလညျးအတော်လေးမကြာခဏ "Inbox ထဲမှာ" ၌စိမ့်။
Mail.Ru အဆိုပါ Bat မေးလ်ချိန်ညှိခြင်း,
Mail.Ru အလွန်အဆင်ပြေနှင့်ဘရောက်ဇာထဲမှာမေးလ်ဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုနိုင်စေရန်။ သငျသညျကိုအီးမေးလ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်လျှင်သို့သော်သင်သည်စနစ်တကျသင့်လျော်သော software များနှင့်အတူက configure ချနိုင်မှကြိုက်တတ်တဲ့လိမ့်မယ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော်လူကြိုက်အများဆုံးအီးမေးလ်ဂလိုင်းအဆိုပါ Bat ၏တဦးတည်းကို configure ဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုမည်!
စာအီးမေးလ် client ကိုအဆိုပါ Bat တွေကိုသိမ်းဆည်းဖို့အဘယ်မှာရှိ!
Mailer အဆိုပါ Bat အသုံးပြုတဲ့အခါ! သငျသညျကိုမေးလိမ့်မယ်: က mailer "ခြံ" ဘယ်မှာသင့်ကွန်ပျူတာ၏ hard drive ကိုဆာဗာကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်စာအပေါ်တိကျတဲ့ဖိုင်တွဲနားလည်သဘောပေါက်သည်, သည် "ဘယ်မှာ program ကိုစတိုးဆိုင်များအားလုံးအဝင်မေးလ်ဖြစ်ပါတယ်" ။ ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီမျိုးကိုရိုးရှင်းစွာအဘယ်သူမျှမကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့။ အများစုမှာဖွယ်ရှိ, သင် client ကိုဒါမှမဟုတ် operating system-install ပွီ, ယခုမေးလ်ဖိုလ်ဒါရဲ့ contents recover ချင်တယ်။
ကို set up က e-mail ကို client ကိုအဆိုပါ Bat!
Ritlabs ကနေ E-mail ကို client ကိုယင်း၏မျိုးရဲ့အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်များ၏တဦးတည်းဖြစ်၏။ အဆိုပါ Bat! ကအများဆုံးကာကွယ်ထား mailers များ၏ရာထူးအထဲသို့ဝင်သောကားလုပ်ငန်းဆောင်တာများအစုအဖြစ်အလုပ်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဝန်းရံဖို့လုံလောက်တဲ့ကွဲပြားခြားနားသောမသာ။ အများအပြားတို့အားဤသို့သော software ကိုဖြေရှင်းချက်များအသုံးပြုမှုမလိုအပ်ဘဲရှုပ်ထွေးပုံပေါက်ပေမည်။
အဆိုပါ Bat အတွက် Yandex.Mail ချိန်ညှိခြင်း,
Mail client အဆိုပါ Bat! ဒါဟာအီးမေးလ်ကိုအတူလုပ်ကိုင်မှုအတွက်အမြန်ဆုံး, အလုံခြုံဆုံးနှင့်အအလုပ်လုပ်တဲ့ဆော့ဖျဝဲတစျခုဖွစျသညျ။ ဒီထုတ်ကုန် Yandex သူတို့အပါအဝင်လုံးဝမဆိုအီးမေးလျ-န်ဆောင်မှုများ, ထောက်ခံပါတယ်။ ဒါဟာဒီ Bat ကို configure ဘယ်လိုပါ! Yandex နှင့်အတူအလုပ်ဖြည့်စွက်ရန်။
အဆိုပါ Bat အတွက်ဂျီမေးလ်လိပ်စာတက်ချိန်ညှိခြင်း,
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် Gmail ကိုအတူလုပ်ကိုင်ဖို့, သင်ဝန်ဆောင်မှု၏ဝဘ်ဗားရှင်း, ဒါပေမယ့်လည်း Third-party အစီအစဉ်များကိုအမျိုးမျိုးမသာကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒီလိုမျိုးရဲ့အကောင်းဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကိုတစ်ခုမှာအဆိုပါ Bat ပါ! - ကာကွယ်မှုတစ်ခုမြင့်မားတဲ့ဘွဲ့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်တဲ့ mail client များ။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ Gmail ကို-box ကိုနှင့်အတူအပြည့်အဝအပြန်အလှန်ဤဆောငျးပါးတှငျဆှေးနှေးမညျအတွက် "Bat" setting အကြောင်းပါ။
အမှားဆုံးအ Bat ထဲမှာ "ဆာဗာတစ်ခုအမြစ်လက်မှတ်ကိုတင်ပြဘူး"!
တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ - မေးလ် client ကိုအဆိုပါ Bat သုံးစွဲဖို့ကအဓိကအကြောင်းပြချက်များထဲမှ! သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ။ ထို့အပြင် - ဤအစီအစဉ်၏လက်ရှိ Analogues အဘယ်သူအားမျှအီးမေးလ်ကို-သေတ္တာများ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်အားစီမံခန့်ခွဲရန်နှင့်အလားတူလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဝါကြွားလို့မရပါဘူး။ မည်သည့်ရှုပ်ထွေးဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်ကုန်, အဆိုပါ Bat လိုပါပဲ!
https://termotools.com my.termotools.com © အဆိုပါ Bat! 2019